सृजना फाइनान्सले रिक्त पदका लागि कर्मचारी माग्यो, अनुभव नहुनेका लागि प्राथमिकता ! - Everest Dainik - News from Nepal
सृजना फाइनान्सले रिक्त पदका लागि कर्मचारी माग्यो, अनुभव नहुनेका लागि प्राथमिकता !
काठमाडौं, असोज ९ । सृजना फाइनान्स लिमिटेडले विभिन्न रिक्त रहेका पदहरुमा कर्मचारीको लागि आवेदन खुला गरेको छ ।
इच्छुक आवेदकहरुले निम्न योग्यताअनुसार, आफ्नो रुचीअनुुसारका जागिर खान चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो उक्त मिति, समय र स्थानमा गएर आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।
याे पनि पढ्नुस माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा १०१ कर्मचारी माग
उसले २ जना शाखा प्रबन्धक र केही संख्यामा ट्रेनी एसिस्टेन्ट माग गरेको हो ।
स्नातक वा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरी र २–३ वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिले शाखा प्रबन्धकमा आवदेन गर्न सकिने छ । ट्रेनी एसिस्टेन्टका लागि भने अनुभव नभएकाले पनि आवदेशन दिन पाउने छन् ।
याे पनि पढ्नुस अोम गणेशाय नम : वचत तथा ऋण सहकारीमा कर्मचारी माग्यो (सूचीसहित)
शैक्षिक योग्यता मेनेजमेन्टमा प्लस दुई वा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने छ । आवेदन दिने म्याद ५ अक्टोबरसम्म रहेको छ ।